सोलार Archives - UrjaKhabar सोलार Archives - UrjaKhabar
साेलार ऊर्जामार्फत ढाेरपाटनकाे बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकम सेवा
असोज ०६, २०७७
बागलुङ । अविरल वर्षासँगै गत भदौ १७ गते राति ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं ९, ८ र ७ बोबाङ स्थित भुजिखोलामा बाढी आयो । बाढीले अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुरायो ।
बाढीले भूजिखोलामा सञ्चालित लघुजलविद्युतगृहहरू बगायो । विद्युत सेवा बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रमा मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको थियो । सडकमा बाढीले क्षति पुराएको हुँदा तत्काल त्यहाँ मोबाइल सेवा सञ्चालनमा आउन सकेन ।
ढोरपाटन नगरपालिकाको पहलमा केही दिन पहिले सडक मर्मतपश्चात अहिले सडक सञ्चालनमा आएको छ । सडक सुचारु भएसँगै नेपाल टेलिकमले अवरुद्ध मोबाइल सेवा पुन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
तत्काल त्यहाँ रहेका लघुजलविद्युत सञ्चालनमा आउने सम्भावना नरहेपछि वैकल्पिक ऊर्जा सोलार जडान गरी सेवा सुचारु गरेको टेलिकम बागलुङका प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनयर केशव शर्माले जानकारी दिए ।
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ८ बोवाङ बिजौरेमा रहेको टावरमा १३५ वाटको २४ थान सोलार जडान गरेर अवरुद्ध सञ्चार सेवा सञ्चालन गरिएको वरिष्ठ इन्जिनियर शर्माले बताए । सेवा सुचारु गर्न नेपाल टेलिकमले पोखराबाट प्राविधिक टिम सहित सोलार सेट व्यवस्थापन गरेको थियो ।
विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवाबाट सेवाग्राही वञ्चित भएका थिए । सालझण्डी-ढोरपाटन सडकबाट टावरसम्म सामाग्री पुर्याउन स्थानीयबासिन्दा, विपत व्यवस्थापनमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टिम र जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गरेको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले जानकारी दिए ।
कोरोना कहर र प्रतिकूल मौसमका बावजुत जनताको सञ्चार सुविधालाई मध्यनजर गर्दै टावर सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल टेलिकम पोखराका इन्जिनियर कुमोदकुमार महतोले बताए । बोबाङको विजौरेको टावर अवरुद्ध हुँदा त्यस आसपास र ढोरपाटन नेपानेमा रहेको टावरमा रेडियो लिंक बन्द रहेको थियो ।
लिंक बन्द हुँदा ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा मोवाइल सेवा अवरुद्ध रहेको नेपाल टेलिकम पोखराका इन्जिनियर शिवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । टावरमा सोलार जडान गर्न प्राविधिक कटकबहादुर गुरुङ सहितको टिम बोवाङ पुगेको थियो ।
टेलिकमको नमस्ते मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ का बासिन्दा सञ्चार सेवा बाट वञ्चित हुनुका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत वितरणमा समस्या भएको थियो । मोवाइल सेवा सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयहरू खुसी भएको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीले बताए ।
ढोरपाटन नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रको समन्वयमा यस वर्षभित्र नगरपालिकाभर केन्द्रीय विद्युत पुराउने काम भइरहेको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पुँजीबजारमा जलविद्युतकाे हिस्सा ५.४ प्रतिशत
भदौ ०, २०७७
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजी बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ५.४ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जलविद्युत् क्षेत्रको योगदान उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको ७८.२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको ३.७ प्रतिशत, हेटेलको १.१ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको ०.३ प्रतिशत र अन्य समूहको हिस्सा ११.३ प्रतिशत छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले (नेप्से) लिमिटेडमा २०७७ असारसम्म सूचीकृत ४ अर्ब ८३ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य ४ खर्ब ७३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । अहिले नेप्सेमा ३३ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् ।
सौर्य विद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा, बैशाखदेखि १५ मेगावाट उत्पादन
काठमाडौं । नुवाकोटमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटकाे सौर्य विद्युत आयोजनाबाट बैशाखदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाबाट पहिलो चरणमा १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्न लागिएको हो ।
चैतभित्र ५ मेगावाट र बैशाखभित्र थप १० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने गरी काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार प्यानल राख्ने ठाउँ पहिचान गरी थप १० मेगावाटको निर्माण अघि बढाइएको छ ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
केन्द्रको कर्मचारी आवास क्षेत्र नजिकैको खाली जग्गामा १० मेगावाट र विद्युतगृह नजिकै ५ मेगावाटको सौर्य पाता जडान भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले पाता जडान कार्य धमाधम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘एउटा पाताले २ सय ७५ वाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्छ ।’
१ मेगावाटको प्यानल राख्न २० रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सौर्य विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत जोड्न ६६/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
सबस्टेसन सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने हुँदा तत्कालका लागि आयोजनाको विद्युत वैकल्पिकरुपमा ३३ केभी लाइनमा जोड्न घिसिङले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । जवाफमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले बैशाखभित्र १५ मेगावाट वैकल्पिक लाइनमार्फत प्रणालीमा जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाखमा आयोजनाको शिलान्यास गरेपछि निर्माण सुरु भएको थियो । सुरुमा १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि डिजाइन स्वीकृति, रुख कटानको स्वीकृति लिन समय लागेकाले ढिलाई भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘रुख कटानको कानुनी प्रकृया पूरा गर्न समय लाग्यो । ठेकेदारले पनि डिजाइन तयार गर्न समय लगायो । परामर्शदाताबाट स्वीकृत हुन झन धेरै समय लागेकाले निर्माण तालिका प्रभावित हुन गएको हो’ उनले भने ।
विश्व बैकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीस“ग ३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सौर्य विद्युत आयोजनाको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको काम ५ वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनीले गर्नेछ ।
कम्पनीले ५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेपछि आयोजना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ३ करोड ३० लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुलेखानी जलाशय र कालीगण्डकी ए, मध्यमर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दीलगायत अर्ध–जलाशय आयोजना विद्युतको माग बढी हुने बिहान र साँझको समयमा सञ्चालन गर्न गरेर माग व्यवस्थापन गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पाल्पाकाे मित्यालमा २५ किलाेवाटकाे हाइब्रिड सौर्य/वायु ऊर्जा, १ सय ४७ घरधुरी लाभान्वित
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्रले पाल्पाकाे निस्दी-मित्यालमा २५ किलाेवाटकाे साैर्य/वायु आयाेजना निर्माण गरेकाे छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) काे अनुदान तथा केन्द्रकाे प्राविधक सहयाेगमा उक्त आयाेजना निर्माण भएकाे हाे ।
दिउँसाे साेलार र राती हावाबाट विद्युत उत्पादन हुने प्रविधि अनुसार साेलार तथा हावाबाट क्रमशः १० किलाेवाट र हावाबाट १५ किलाेवाट विद्युत उत्पादन भइरहेकाे छ । उत्पादित विद्युतबाट करिब १ सय ४७ घरधुरी र ८ वटा अफिसमा सेवा प्रवाह भइरहेकाे निस्दी गाउँपालिका प्रमुख मुक्तबहादुर सारुले बताए । उनका अनुसार केन्द्रको १ करोड ८० लाख र गाउँपालिकाको ४२ लाख १३ हजार ८ सय रुपैयाँको लागतमा आयोजना पूरा भएकाे छ ।
‘करिब साढे दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको आयोजना सम्पन्न भएर घरघरमा विद्युत सेवा पुर्याइएको हाे,’ उनले भने, ‘मित्यालको रुक्से भञ्ज्याङ डाँडामा प्लान्ट राखिएकाे छ ।’ यसअघि निस्दी गाउँपालिकामा हावाबाट १२ वाटको विद्युत उत्पादन गरी २ वटा अफिसमा सञ्चालनमा ल्याइएकाे थियाे । थप विद्युतिकरणका लागि हाइब्रिड आयाेजना निर्माण भएकाे र यसबाट स्थानीबासी खुसी देखिएकाे सारुले बताए ।
गाउँमा विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि घर, बाटो र चोकमा राती पनि बत्ती झलमल बलेको छ । विद्युतिकरणबाट गाउँमा फोन तथा टेलिभिजन सुविधा उपलब्ध भइरहेकाे छ । एक वर्ष अगावै सक्ने लक्ष्यसहित थालिए पनि आवश्यक सामग्री आयात गर्न ढिलाई भएपछि विद्युत उत्पादन अवधि लम्बिएको हो । विद्युत निकाल्न आवश्यक संरचना बनाउने ठेक्का विराटनगरको कृष्ण ग्रिल एण्ड इन्जिनियरीङले पाएकाे थियो ।
मकालु गाउँपालिकाका ५२ परिवारलाई निशुल्क सोलार बत्ती
पुष १७, २०७६
काठमाडौं । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका ५२ घर परिवारलाई निशुल्क सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । मकालु–४ को सेलसेले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमाआवद्ध ५२ परिवारले निशुल्क साेलार बत्ती पाएका हुन् ।
कोशी टप्पु टु–कन्चनजंगा संरक्षण (केटिके बेल्ट) को आर्थिक सहयोगमा स्थानीयलाई निशुल्क सोलार बत्ती वितरण गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली राईले बताइन । उनका अनुसार निशुल्क साेलार बत्ती पाएपछि वर्षाैंदेखि टुकीकाे भरमा जिविका चलाउँदै आएका पावाखोला र बिहीबारेका स्थानीय हर्सित भएका छन् ।
वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समहूमा आवद्ध परिवारलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको केटिके बेल्टका प्रमुख राजीव गोयलले बताए । सोलारबाट मोबाइल चार्ज गर्न र २ वटा बत्ती बाल्न मिल्छ । गाउँमा विद्युतीकरण नहुँदा स्थानीय विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नबाट बञ्चित थिए । मोबाइल चार्ज गर्न पनि छिमेकी गाउँमा जानुपर्ने समस्या अब टरेको स्थानिय बताउँछन् ।
अहिलेसम्म गाउँपालिकाकाे केन्द्र नुम बजारमामात्र विद्युतीकरण भएको छ । गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँमा विद्युतको पहुँच पुगेको छैन ।
सिँचाइकाे पहुँचका लागि बालिथुम गाउँमा सोलार पम्पिङ प्रविधि
काठमाडौं- गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकास्थित बालिथुम गाउँमा सोलार पम्पिङ आयोजना निर्माण भइरहेकाे छ। नवीकरणीय ऊर्जाबाट गाउँमा सिँचाइ तथा पानीको पहुँच पुर्याउन ग्रामीण पूर्वाधार विकास समूह, नेपाल (ग्रिड नेपाल) ले स्थानीयसँगकाे सहकार्यमा आयोजना निर्माण गरिरहेकाे हाे ।
पहाडी क्षेत्रमा लिफ्टिङबाट खेतबारीमा सिँचाइ गर्न सोलार पम्पिङ प्रविधि उपयुक्त देखिएकाले ‘पाइटल प्रोजेक्ट’ कोरूपमा आयोजना अघि बढाएको ग्रिड नेपालका इन्जिनियर रामबहादुर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने याे आयोजना पूरा भएपछि स्थानीय क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीको सुविधा एकसाथ पुग्नेछ ।
आयोजनामा साेलार प्यानल जडानको काम पूरा भएकाे छ । ‘प्यानल जडान को काम सकियाे,’ उनले भने, ‘पम्प तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण र पाइप पनि जडान भयाे।’
अब साेलार पम्पले पम्पिङ गरेर तान्ने पानीको परिमाणको परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । आयोजना सम्पन्न गरेर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि तालिम दिइने बताए ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि ग्रिड नेपालले सञ्चालनका लागि स्थानीयमा हस्तान्तरण गर्नेछ । आयोजना सञ्चालनमा आउँदा गाउँकाे कृषियाेग्य भुमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ । बालिथुमकाे माटाे तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण कृषकले राम्राे उत्पादन गर्न नसक्दा प्रतिफल पनि पाउन सकेका थिएनन् ।
आयोजना सञ्चालन हुँदा स्थानीय स्तरमा नै कृषि क्षेत्रमा राेजगारीकाे अवसर सृजना हुने अपेक्षा गरिएकाे छ । अहिले पानी तान्न खपत भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ पनि प्रतिस्थापन हुने ग्रिड नेपालले जनाएकाे छ ।
ग्रमीण विद्युतिकरणमा साेलार मिनी ग्रिड, ‘प्रि–पेड मिटरबाट पहिला पैसा बल्ल बिजुली !
सुर्खेत (गुटु)– ‘भरपर्दो बिजुली नहुँदा व्यावसायिक काम गर्न पाइएको थिएन । अहिले त्यसको चिन्ता छैन । मैले बिजुलीबाटै टेलरिङ पेसा विस्तार गरेकी छु ।’ यो भनाइ हो, गुटुकी पार्वती सापकोटाको ।
चौकुनी गाउँपालिका-८ गुटु मोतिसेरामा पछिल्लो एक वर्षदेखि टेलरिङ पेसामा आवद्ध उनले व्यवसायमा निकै सुधार आएको सुनाइन् । पार्वती जस्तै धेरै महिलाको दैनिकी तथा जीवनयापन बिजुलीले सजिलो बनाइदिएको छ ।
गाउँलेले कुखुरा फार्म चलाएका छन् । ग्रिल तथा फर्निचर उद्योग, चाउमिन फ्याक्ट्री, मसला लगायत त्यस क्षेत्रमा २४ उद्योग चलेका छन् । बिजुलीले गाउँलेको दैनिकी मात्र परिवर्तन गरेको छैन, आम्दानीको दायरा पनि फराकिलो बनाइदिएको छ ।
आ–आफ्नो क्षमता, सीप र लगानी अनुसारको व्यवसाय गरेका छन् । पसल तथा घरमा फ्रिज राख्नेहरू बढेका छन् । सोलार गाउँलेका लागि बरदान सावित भएको स्थानीय अमृता आचार्यले बताइन् ।
‘पहिला घरको छानामा सोलार पाता राखेर बत्ती बालिन्थ्यो, राम्रोसँग घाम नलाग्दा काम गर्थेन,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘सोलार आयोजना बनेपछि बिजुलीको उज्यालो भरपर्दो भएको छ । गर्मी हुँदा फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउन पाइएको छ ।’
एडिबीको ९० प्रतिशत अनुदान र स्थानीयको १० प्रतिशत लगानीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) अन्तर्गतको ‘ग्रामीण जीवनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम’ ले निर्माण गरेको आयोजनाबाट ३ सय ४४ घरमा विद्युतीकरण गरिएको छ । यद्यपि, अहिले २ सय ५१ घरले मात्र मिटर जडान गरेका छन् ।
५ करोड ६८ लाख ३९ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ लागतमा प्लान्ट (गुटु सोलार मिनी ग्रिड परियोजनां निर्माण भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये एडिबीले ४ करोड ५० लखा ४७ हजार, केन्द्रले ६७ लाख ८७ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर) र गाउँपालिका तथा उपभोक्ताको करिब ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
पहिला पैसा अनि बिजुली
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुगेपछि ग्रिडमा जोड्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको सोलार प्लान्ट अत्याधुनिक छ । हरेक उपभोक्ताका घरमा प्रिपेड मिटर (पैसा तिरेपछि मात्र बिजुली बाल्न पाइने) जडान गरिएको छ ।
उपभोक्ताका नाममा बैंकको एटिएमजस्तै कार्ड बनाइएको छ । उनीहरूले प्लान्टको कार्यालयमा एकमुष्ट ५ सय वा हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गर्ने गर्छन् । बिजुली प्रयोग गर्दै जाँदा पैसा पनि घट्दै जान्छ । जम्मा गरेको रकम सकिना साथ लाइन स्वतः लाइन काटिन्छ ।
बिजुलीको पैसा उठाउन छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने र यसले खर्च बढाउने हुँदा उपभोक्ता स्वयं जिम्मेवारी हुँदा बढी प्रभावकारी देखिएको प्लान्ट अपरेटर टीकाराम आचार्यले बताए । ‘नयाँ प्रविधिका कारण उपभोक्ताले समानरूपमा विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘बढी प्रयोग गर्नेले त्यही अनुसार पैसा तिर्छन् ।’ आयोजनाले हरेक घरलाई ६ वटा बल्ब बाल्ने गरी लोड स्वीकृत गरेको छ ।
केन्द्रीय लाइन नआएको ठाउँमा सोलार निर्माण भएकाले सबै गाउँबासी निकै खुसी भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर बुढा क्षेत्रीले बताए । ‘उत्पादित बिजुलीले साविक वडामा मात्र नभएर ६ र ७ नम्बरमा पनि पुर्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मिलाएर उपभोग गरे धेरैले सेवा पाउनेछन् ।’
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान
सोलार आयोजना देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो आधार पनि भएको छ । गत बैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाबाट अहिलेसम्म करिब ८० हजार रुपैयाँको बिजुली बिक्री भएको गुटु सोलार मिनी ग्रिड उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र चलाउनेले जानकारी दिए ।
सोलार आयोजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ । आयोजना उदघाटनमा पुगेका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले अब स्थानीयले आम्दानी बढाउनुपर्ने बताए ।
‘सरकारले दुई वर्षभित्र देशका हरेक ठाउँमा उज्यालो पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय ग्रिड पुगेपछि जोड्न मिल्ने प्रविधिमा हामी काम गरिरहेका छौं । यो स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोत पनि हुने छ ।’
सोलार मिनी ग्रिडले उद्योगधन्दा चलाउन सजिलो भएको गाउँपालिका प्रमुख धिरबहादुर शाहीले बताए । ‘फलामका पाता बारीमा राखेर बिजुली बल्छ भन्ने कमैले विश्वास गरेका थिए,’ उनले विगत सम्झे, ‘आज सम्भव भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
आयोजना दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सक्षम व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने एडिबीका आयोजना प्रमुख (ऊर्जा) पुष्कर मानन्धरले बताए । ‘सरकार वा एडिबीले एक पटक सहयोग गर्ने हो, यो स्थानीयकै सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सञ्चचालन गर्न तालिम लिने वा सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा केन्द्रले पनि सहयोग गर्ने छ ।’
उपभोगका आधारमा बिजुलीको महसुल तिर्दा प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । यो दर महँगो भएको केहीले बताएका थिए । बिजुली उपभोग गर्दा खर्च बढे पनि यसैबाट आम्दानी बढाउनुपर्ने वडाध्यक्ष ताराकेशर सुबेदीले बताए ।
‘महँगो भन्दै बिजुली प्रयोग नगर्ने होइन, कहिलेसम्म अँध्यारोमा बस्ने ? बरु यसलाई आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीबाट कृषिमा सिँचाइ गरी उब्जनी बढाउन सकिन्छ । यसले जनजीवन अझ सहज हुँदै जान्छ ।’
सरकारले दुई वर्षभित्र हरेक घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियानमा मिनी ग्रिड सहायक सिद्ध हुन सक्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म करिब २७ प्रतिशतमा मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । उता सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशतले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् ।
दुर्गम गाउँमा प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युतीकरण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसको तुलनामा सोलार मिनी ग्रिड विस्तार गर्दा सर्वसाधारणले उज्यालो पाउने र सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिन्छ ।
सोलारबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य, ७२ अर्ब लागत अनुमान
श्रावण ११, २०७५
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र सोलारबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । मिश्रित ऊर्जा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार सोलारबाट विद्युत उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत बैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा जोड दिइएको छ ।
‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने उल्लेख छ । साथै, हरेक तहले सयदेखि ५ सय किलोवाटसम्म सौर्य विद्युत जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र २ सय मेगावाटसम्म सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । स्थानीय तहले खपत गर्न नसक्ने विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्ने पनि श्वेतपत्रमा किटान गरिएको छ । श्वेतपत्रका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ ।
उक्त कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र सोलारबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरी केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत लागत बेहोर्ने भनिएको छ । सोही अनुसार कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए ।
चालू आवको बजेटमा समेत देशका हरेक घरमा विद्युत पुर्याउन सोलार, वायु तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ । मन्त्री पुन ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । सम्भाव्य स्थानमा सोलार, वायु, भू–तापीयलगायत ऊर्जा विकास गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म साेलारबाट करिब डेढ मेगावाटमात्र विद्युत उत्पादन भएकाे छ । उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकाेटकाे त्रिशूलीमा २५ मेगावाटकाे साेलार प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएकाे छ । प्राधिकरणले केही साेलार अायाेजनाका प्रवर्द्धकसँग साेलारकाे विद्युत खरिद सम्झताैता (पिपिए) गर्ने तयारी गरेकाे छ ।
९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनकाे लक्ष्य राखेकाे सरकारले निजी क्षेत्रले अघि बढाएकाे ६१ मेगावाटकाे साेलारकाे भने पिपिए गरेकाे छ । सरकारले ताेकेकाे पुरानाे दरमा पिपिए गर्न नसकिने बताएपछि प्रवर्द्धक त्यतिकै थन्किएका छन् ।
साेलार पिपिए, प्राधिकरणलाई साढे ५ अर्ब भार
माघ ०, २०७४
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइनमा जोड्न मिल्ने गरी उत्पादन हुने सौर्य विद्युत् (ग्रिड कनेक्टेड सोलार) को पिपिए (विद्युत् खरिद सम्झौता) पुरानै मापदण्डमा गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । पुरानो मापदण्डअनुसार पिपिए गर्दा सोलार आयोजना सञ्चालन अवधिभर प्राधिकरणलाई झन्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिनेछ ।
सरकारका नीतिगत बेथिति, पुरानै दरमा सोलारको पिपिए गर्न निर्देशन
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी गर्ने उल्लेख छ । यो पिपिएको आधार विन्दु (बेन्च मार्क) हो ।
मन्त्रालयले दुईभित्र सौर्य विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी अर्को कार्यविधि जारी गर्यो । गत मंसिर ६ गते जारी भएको कार्यविधिमा ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन गर्न इच्छुक ९ कम्पनीले २१ ठाउँबाट वार्षिक १० करोड ४० लाख ६९ हजार ४ सय ९७ युनिट विद्युत् (६१ मेगावाट) प्राधिकरणलाई बेच्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसरी विद्युत् बेच्न प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँदेखि ९.४५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए ।
मन्त्रालयले पछिल्लो कार्यविधिमा थोकमा विद्युत् किन्न नयाँ दर (प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ) तोक्यो । तर, पुरानो प्रक्रियामा अघि बढाइसकेका कम्पनीसँग त्यही दरमा पिपिए गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
पुरानो दरमा पिपिए गर्दा एक वर्षमा प्राधिकरणले करिब १६ करोड रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्नुपर्छ । याे साेझाे नोक्सानी हाे । विद्युत् उत्पादन तथा सञ्चालन अवधि ३५ वर्ष तोकिएको छ । उत्पादन र सञ्चालन अवधिसमेत हिसाब गर्दा प्राधिकरणले ३५ वर्षमा ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
दुई वर्षभित्र दुई कार्ययोजना तथा कार्यविधि जारी गर्नुले विद्युत् उत्पादनमा सरकारका नीति कति अस्थिर छन् भन्ने देखाउँछ । अर्कोतर्फ प्राधिकरणलाई कुन कार्यविधि मानेर काम गर्ने भन्ने अन्योल एवं द्विविधा रहिरहन्छ ।
२०७२ को कार्ययोजना अनुसार निजी कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गरेर प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले विद्युत् विकास विभागमा २२ आवेदन दिए । क्षेत्रगत अध्ययन तथा सम्भाव्यताका आधारमा विभागले ९ कम्पनीलाई २१ ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिपत्र दियो ।
विद्युत् उत्पादन गर्ने स्थानदेखि प्राधिकरणको नजिक पर्ने सबस्टेसनसम्म कम्पनी आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने सर्त छ । यही सर्तअनुसार अधिकांश आयोजनाको प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) समेत भइसकेको थियो । र, पिपिए प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विश्वमा सौर्य विद्युत् उत्पादनको लागत तथा उपकरणको मूल्य कम हुँदै गएको छ । यही विषयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले पछिल्लो कर्यविधि जारी गरेको छ । तर, यसले कार्यान्वयनकर्ता निकाय (प्राधिकरण) अन्योल बढेको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो कार्यविधि जारी गरेकाले पुरानो मापदण्डमा जान नसकिने प्राधिकरणको तर्क छ । पुरानै दरमा पिपिए गर्ने हो भने खिम्ती र भोटेकोसीमा जस्तै ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
उक्त तर्क वा भनाइसँग प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारी र व्यवस्थापन सहमत छ । तर, मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने कि नमान्ने अन्योल त्यतिकै छ । पुरानो दर वा प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा पिपिए गर्ने भन्ने द्विविधिा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।
‘पुरानो दरमा पिपिए गर्दा विगतको प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयन हुन्छ तर नयाँ दर तोकिएको अवस्थामा कानुनी जटिलता आइपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कोही कर्मचारी काम गर्न अग्रसर हुँदैनन् ।’
नयाँ पिपिए दर तोकिए पनि पुरानो प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यही अनुसार काम गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) अनुसार अघि बढ्न मन्त्रीज्यूको निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘यसमा अप्ठ्यारो नहोला ।’
सिन्धुलीको दुर्गम गाउँका ८३ घरले बिजुली पाए
ऊर्जा खबर/चिसापानी (सिन्धुली)
राजधानीको धेरै नजिक रहे पनि वर्षौं अँध्यारोमा बसेको सिन्धुलीको चिसापानीका गाउँलेले मंगलबार (मंसिर २६ गते) देखि बिजुली बाल्न पाएका छन् । एडिबीको सहयोगमा परिचालित दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत आयोजना निर्माण भएको हो ।
सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग तथा स्थानीयको प्रयासमा ३५ किलोवाटको सौर्य तथा वायु ऊर्जा आयोजना निर्माणपछि बिजुलीको पहुँच पुगेको हो ।
याे बागमती अञ्चलकाे काभ्रे, जनकपुर अञ्चलकाे सिन्धुली र नारायणी अञ्चलकाे मकवानपुरकाे संगममा पर्छ । यहाँबाट एक घन्टाकाे पैदल यात्रा र करिब ३ घन्टाकाे बस यात्रापछि ललितपुर पुगिन्छ ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल र एडिबीका अावासीय निर्देशक मुख्ताेर हामुद खानाेभले रिबन काटेर प्लान्ट उद्ङाटन गर्दै
वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल र एडिबीका आवासीय निर्देशक मुख्तोर हामुद खानोभले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका चिसापानीमा १५ किलोवाट सोलार र २० किलोवाटको वायु ऊर्जा प्रणाली निर्माण भएको छ । घाम लाग्दा सोलार प्यानलबाट र साँझ वा राती हावाबाट विद्युत् उत्पादन हुने (हाइब्रिड) गरी आयोजना निर्माण भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव माथेमाले विद्युत्को पहुँच पुगेपछि बत्ती बाल्नमात्र नभई स्थानीयले अन्य काम पनि गर्न सक्ने बताए । ‘देशका दुर्गम ठाउँमा उज्यालो पुर्याउने अभियानअनुसार यो आयोजना निर्माण भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट स्थानीयले कुटिर उद्योग चलाएर जीवनस्थर सुधार्न सक्छन् ।’
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका चिसापानीमा निर्माण भएकाे हाइब्रिड वायु तथा साेलार अायाेजना
यसैगरी, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालले आयोजना दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सथानीयले मर्मत तथा संभारको काम सिक्नुपर्ने बताए । ‘दिउँसो उत्पादन हुने बढी विद्युत् कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ स्थानीय सचेत हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले सामाजिक परिचालिका मार्फत अध्ययन गरेर बढी भएको विद्युत् खपतको योजना बनाउनेछ ।’
दुर्गम ठाउँमा विद्युत् पुग्दा बत्तीको उज्यालोमात्र नभई सिँगो जनजीवनमा सुधार आउने एडिबीका आवासीय निर्देशक खानोभले बताए । ‘साँझको समयमा बालबालीकाले पढ्न पाउँछन्, यसले शैक्षिकस्तरमा सुधार ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘शिक्षामार्फत गाउँ र त्यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुन्छ ।’
केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन भएको आयोजना सूर्योदय ऊर्जा प्रालिले निर्माण गरेको हो । सासेक कार्यक्रमबाट देशका दुर्गम ठाउँमा सोलार र वायुबाट ४.३ मेगावाट (४३०० किलोवाट) तथा साना जलविद्युत्बाट ५ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एडिबीले एडिबीले करिब ३० करोड रुपैयाँ (३० लाख अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ । यसअघि, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ३० किलोवाटको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ ।
एडिबीकाे सहयाेगमा २०६८ सालमा परीक्षण उत्पादनकाे रूपमा नवलपरासीकाे धाैबडीमा १० किलाेवाटकाे वायु र २ किलाेवाटकाे साैर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान भएकाे थियाे ।